Nagarik News - डी मारिया रियालबाट विदा!
डी मारिया रियालबाट विदा!
25 Aug 2014 | 07:56am
लन्डन– म्यानचेस्टर युनाइटेडले रियाल मड्रिडका अर्जेन्टिनी विंगर एन्जेल डी मारियालाई भित्राउने सम्भावना बलियो भएको छ।
डी मारियासँग सम्झौता गर्न युनाइटेड बेलायती कीर्तिमानी सरुवा रकम तिर्न तयार हुनुपर्ने त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। डी मारियाले रियालका टिम सहयात्रीसँग विदा लिइसकेका छन्।
२६ वर्षे मिडफिल्डरको सुरुवा स्पेनिस स्ट्राइकर फर्नान्डो टोरेसको भन्दा महंगो हुने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०११ मा टोरेस लिभरपुलबाट ५ करोड पाउन्डमा चेल्सी गएका थिए। युनाइटेडले उनलाई ७ करोड ५० लाख पाउन्डसम्म तिर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। युनाइटेडले पछिल्लो पटक २००२ मा लिड्सबाट रियो फर्डिनान्ड भित्राउँदा २ करोड ९१ लाख पाउन्डको तत्कालिन वेलायती कीर्तिमानी रकम खर्चिएको थियो।
२०१० मा डी मारिया २ करोड पाउन्डमा बेन्पि्ककाबाट रियाल पुगेका थिए। त्यसयता उनी क्लबको महत्वपूर्ण सदस्य रहँदै आएका थिए। गत सिजन क्लबले दसौं पटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिग जित्दा उनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण थियो। तर गत साता स्पेनिस सुपर कपमा उनी टोलीमा पर्न सफल भएनन्।
तीघ्राको चोटका कारण विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा बेल्जियमविरुद्ध खेल्न नसकेका डी मारिया प्रि सिजन तयारीमा फर्ममा थिए। उनी विश्वकपको उत्कृष्ट १० खेलाडीमा समेटिएका थिए। यसपटक सरुवा बजार खुला भएसँगै उनी प्रिमियर लिगमा जाने चर्चा व्यापक भएको थियो।
‘डी मारियाले आज हामीसँग अभ्यास गरेनन्। उनी खेलाडी र क्लबका अन्य व्यक्तिसँग विदा माग्न आएका थिए,' रियालका प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोट्टीले भने, ‘अपौचारिक रुपमा केही टुंगिएको छैन।'
द डेली मेलका अनुसार डि मारियाले युनाइटेडका प्रशिक्षक लुइस भान हालसँग आफ्नो भुमिका र ७ नम्बर जर्सीका विषयमा छलफल गरेका थिए। युनाइटेडमा ७ नम्बर जर्सी जर्ज बेस्ट, इरिक क्यान्टोना र डेभिड बेकह्यामले लगाएका थिए।
डी मारियाको सम्झौता भए नयाँ सिजन क्लबमा जाने उनी चौथो खेलाडी हुनेछन्। ल्युक शा, आन्द्रे हेरेरा र अर्जेन्टिनाका मार्कोस रोजा लिन युनाइटेडले ७ करोड २० लाख पाउन्ड खर्चिसकेको छ।
‘व्यक्तिगत रुपमा मलाई यो मन परेको छैन,' रियालका पूर्व प्रशिक्षक रामोन काल्डेरोनले भने, ‘सामान्यता आफूसँग भएका धेरै राम्रा खेलाडी क्लबले बेच्दैन।'